Vato fotsy - Ny vokatra kintana ho an'ny tranonao | Bezzia
Ny vato fotsy: Ny vokatra kintana ho an'ny tranonao
Susana godoy | 13/01/2022 14:00 | an-trano
Fantatrao ve ny vato fotsy? Azo antoka fa efa nandre izany ianareo, satria tena ilaina ho an’ny tokantranontsika izany. Saingy minoa na tsia, rehefa fantatrao ny tombontsoa rehetra ananany dia handeha ianao raha mbola tsy manana izany. Indraindray dia marina fa mitady vokatra manokana ho an'ny surface tsirairay isika. Saingy, ahoana no tianao hananana ny zava-drehetra ao anaty iray?
Zavatra iray izay izany dia hamonjy antsika na amin'ny habakabaka ao an-trano sy amin'ny faritra ara-toekarena. Noho izany, afaka manomboka mahita ny tombony rehetra ananan'ny vato fotsy isika ary ny fomba hampiasana azy io mba hahazoana tombony betsaka amin'izany. Lazainay aminao ny zava-drehetra mba tsy ho very ny antsipiriany!
1 Inona no azo diovina amin'ny vato fotsy
2 Ahoana ny fampiasana ny vato fotsy
3 Avy amin'ny inona ity vokatra fanadiovana ity?
4 Ny tombony lehibe amin'ny vato
Inona no azo diovina amin'ny vato fotsy
Eto saika, saika tsy maintsy manontany tena isika hoe: Inona no tsy azo diovina amin'ny vato fotsy? Satria ny marina dia rehefa mieritreritra ny hanadio ny tranontsika isika, dia azo ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny habakabaka io karazana vokatra voajanahary io. Noho izany, na plastika sy enameled na vy tsy misy dikany dia azo diovina miaraka aminy. Fa ankoatra izany, dia ho tonga lafatra ho an`ny volafotsy, varahina ary na dia kristaly. Ankoatra izany, ao an-dakozia dia afaka manadio ny lavadrano, ny hob seramika sy ny marbra na granita. Izy io koa dia mety tsara amin'ny efitra fandroana sy ny faucets, ary koa amin'ny fanesorana ny tasy harafesina. Koa aza matahotra ny hampiasa azy io, indrindra any amin'ireo toerana izay azon'ny fanadiovana fototra.
Ahoana ny fampiasana ny vato fotsy
Marina fa hisy safidy maromaro, fa ny sasany amin'ireo tena fototra dia matetika mitondra sponjy hanamora ny fanadiovana. Tsy maintsy mandona ity sponjy ity isika ary tatatra tsara. Avy eo, dia handalo azy amin'ny vato fotsy ary avy eo amin'ny tany hotsaboina. Amin'ny maha-fitsipika ankapobeny dia tsy ilaina ny tsy maintsy mikosoka be loatra. Rehefa tena impregnated tsara ny ambonin`ny, esory amin`ny lamba mando mandra-tsy misy sisa ny vokatra. Mba hahazoana ny hamirapiratra ilaina, maka lamba madio sy maina, mba hiverina any amin`ny toerana izay nodiovintsika. Ho hitanao ny famirapiratany ary tsy mila miezaka mafy araka ny voalazanay. Tadidio koa fa tsy mila vokatra be loatra ianao vao mahita vokatra tsara indrindra. Amin'ny vola kely ihany no azonao. Izany no mahatonga azy haharitra ela kokoa noho ny eritreretinao.
Avy amin'ny inona ity vokatra fanadiovana ity?
Miresaka momba ny vato ho toy ny zavatra mahagaga isika. Noho izany, afaka mieritreritra foana isika fa ao anatin'ireo akora misy azy dia misy karazana akora, andao atao hoe manokana, ary tsy misy zavatra lavitra ny fahamarinana. Satria raha tianao ho fantatra hoe inona no mandrafitra azy dia holazainay aminao izany ao anatin’izany no ahitanao tanimanga fotsy sy savony sy rano, amin’ny alalan’ny glycérine anana sy ny karibonetra sodium. Tsy mila zavatra hafa afa-tsy ny fanadiovana ny trano izahay. Antibacterial ihany koa izy io, ka ny fanadiovana dia vao mainka lalina kokoa noho ny noeritreretintsika. Tsy misy karazana akora misy poizina izy io, ka tsy hampahatezitra ny hoditra koa.
Ny tombony lehibe amin'ny vato
Amin'ny fomba tsy azo ihodivirana dia nanonona azy ireo tsikelikely izahay. Ny iray amin'ireo tombony lehibe indrindra dia ny ahafahantsika manadio ny faritra rehetra amin'ny tranontsika miaraka amin'izany. Tsy mandrakotra na mamela tasy raha kobanina tsara Ary izany koa fa ny famirapiratana dia hiseho saika amin'ny alalan'ny ody. Maharitra ela kokoa izy io ary ny vidiny dia ambany noho ny tombontsoa rehetra nomanina ho antsika. Tena mahomby amin'ny tasy sarotra indrindra izy io, mamela ny tranonao ho madio kokoa. Ankoatra izany, ny sasany amin'izy ireo dia manana fofona voasarimakirana izay hameno ny tranonao amin'izany fahatsapana madio izany. Efa nanandrana ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Ny vato fotsy: Ny vokatra kintana ho an'ny tranonao
Inona ny surimi ary inona no nanaovana azy?